Articles tagged 'zimplats'
Mapeza targets strong CL finish 15 March 2019 FC Platinum coach Norman Mapeza is targeting a strong finish to their Caf Champions League flirtation when they host Tunisian giants Esperance at Barbourfields Stadium tomorrow.
Platinum output down 8pc 3 November 2018 HARARE - Zimbabwe's platinum output for the second quarter of 2018 stood at 3 438 kilogrammes (kg), down 8,2 percent from 3 744 kg produced in the first quarter of 2018, the central bank has said. The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) said platinum ore output declined by 10 percent in comparison ...
Zimplats gets $9,6m tax relief 22 September 2018 HARARE - PGMs producer Zimplats Holdings (Zimplats) has been granted a $9,6million tax reversal judgment in a customs duty case against the Zimbabwe Revenue Authority The country's largest platinum miner had filed a suit with the High Court of Zimbabwe challenging the validity of the tax bill...
Zimplats profits up 23pc 2 August 2018 HARARE - ZIMPLATS — Zimbabwe's largest platinum producer — recorded a 23 percent increase in profit to $37,1 million in the quarter to June 2018 from $30,3 million recorded prior comparative period, the group said. This was, however, a 42 percent decrease compared to the $64,5 million recorded...
'Animal husbandry to revive agric sector' 27 March 2018 HARARE - Platinum mining giant, Zimplats, says it is committed to revive Zimbabwe's agriculture sector by supporting animal husbandry. “Cattle farming still has great potential for reforming the agricultural sector in Zimbabwe,” the company said. Zimplats, which recently launched a cattle a...
Zimplats partners Zas on artificial insemination 10 February 2018 HARARE - Zimbabwe's largest platinum miner, Zimplats, has partnered with the Zimbabwe Agricultural Society on an ambitious artificial insemination programme to boost the country's national cattle herd. Artificial insemination is the process of collecting sperm cells from a male animal and arti...
Zimplats surrenders claims to Zim govt 19 September 2017 HARARE - Zimplats, which is majority controlled by Impala Platinum, has said it has agreed to cede a contentious piece of land that it has for years suffered to retain, after government had sought to take it over. This comes after President Robert Mugabe's government made a fresh bid in Januar...
Ngezi catches them young 18 September 2017 HARARE - Sixteen-year-old Takunda Benhura is hoping to be a future Premier Soccer League star after lighting up the Zimplats Ngezi Inter District Sports Tournament last week at Baobab Stadium. The striker was the star of the show as he helped Sanyati A to win the six-team competition. Benhu...
Zimplats commits to Zim 2 May 2017 HARARE - Australia Stock Exchange-listed platinum producer, Zimplats, has vowed to remain in Zimbabwe despite threats by President Robert Mugabe's government to seize more than half of the company's land. This comes as other international mining giants such as Rio Tinto bowed out of the minera...
Zimplats, govt in talks over land grab 27 April 2017 HARARE - Zimbabwe's largest platinum producer, Zimplats, says it is in discussions with government over an impending compulsory acquisition of 28 000 hectares of its land by the State. The Alex Mhembere-led platinum mining company yesterday said while government had already made moves to grab ...
Zimplats swings back to profit 27 February 2017 HARARE - Zimbabwe's largest platinum producer, Zimplats, has recorded a $16,1 million profit in the half year to December 2016 compared to a loss of $0,6 million registered in the previous corresponding period. The group's chief executive, Alex Mhembere, last week attributed the record profits...
Mugabe forges ahead with Zimplats land grab 6 January 2017 HARARE - Zimbabwe government is going ahead with plans to compulsorily acquire 28 000 hectares of mining land in Kadoma held by the country's biggest platinum miner, Zimplats. Through the second publication of a notice to the effect, President Robert Mugabe — ignoring various warnings from mar...
Govt pays Zimplats debt 2 December 2016 HARARE - Australia Stock Exchange-listed platinum miner, Zimplats, yesterday said it has finally been paid the $34 million debt it was owed by the central bank. The money was taken from Zimplats' bank account years back by the Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) and used for quasi-fiscal activities...
Zim moves to acquire Zimplats land 22 November 2016 HARARE - Zimbabwe's cash-strapped government has moved a step closer to compulsorily acquire 28 000 hectares of mining land in Kadoma held by Zimplats, in a development that is likely to put the country on a collision course with foreign investors. President Robert Mugabe — who of late has bee...
Zimplats reduces capex 5 September 2016 HARARE - Zimbabwe's largest platinum producer, Zimplats, said it has reduced its expenditure on capital projects in the country due to deteriorating economic conditions compounded by a biting liquidity and cash crisis. The group's chief executive, Alex Mhembere, said Zimplats has postponed th...
Masunda leaves Zimplats 5 September 2016 HARARE - Former Harare mayor Muchadeyi Masunda (pictured) is resigning from Zimbabwe's largest platinum miner, Zimplats, where he has been a director for the past nine years. The prominent barrister was appointed as a director of the platinum producer in 2007. He was subsequently appointed ...
Zimplats production up 71pc 27 April 2016 HARARE - South Africa-based Impala Platinum (Implats) says platinum production at its Zimbabwean subsidiary rose by 71 percent in the quarter to March 2016 due to new open-pit operations. In the period under review, Zimplats — 87 percent owned by Implats — ramped up production to 89 000 platin...
Zim platinum output to surge 12pc 7 March 2016 HARARE - Zimbabwe's platinum output is expected to surge 12 percent to 430 000 ounces (oz) on the back of the completion of an expansion project at the country's biggest mine, Zimplats, the World Platinum Investment Council (Wpic) has said. According to Wpic's sixth quarterly report titled Pla...
Low metal prices hit Zimplats 25 February 2016 HARARE - Low international prices saw Zimbabwe's largest platinum producer, Zimplats, reporting a 12 percent decrease in revenue for the half year to December 2015 despite a surge in sales volumes. In its interim results published yesterday, the platinum miner said its revenue decreased to $20...
Implats in profit warning 17 February 2016 HARARE - Zimbabwe Platinum Holdings (Zimplats) parent company Impala Platinum Holdings (Implats) says it expects its basics earnings per share (EPS) to decline by 30 percent in the half year to December 2015 due to the decline in international metal prices. The south African platinum producer ...
Zimplats, govt in talks over land grab 1 February 2016 HARARE - Impala Platinum Holdings Limited (Implats)'s Zimbabwean unit, Zimplats, says it is in discussions with government after it asked the platinum miner to cede 28 000 hectares within its special mining lease area. In a statement accompanying the platinum miner's financials for the quarter...
Implats calls for Zim govt support 10 November 2015 HARARE - South Africa's largest platinum miner, Impala Platinum Holdings (Implats), is seeking government support for an expansion programme at its Zimbabwean unit. Implats, which owns 87 percent of Zimplats, says the current economic environment is not conducive for investor confidence due to...
Mixed fortunes for platinum miners 2 October 2015 HARARE - Zimbabwe's largest platinum producer, Zimplats Holdings Limited (Zimplats)'s, indigenisation plan has been approved but the country is yet to give Mimosa Mine the green light to implement its proposal. The miner's chairman Sydney Mufamadi said government authorised the platinum giant ...
Zimplats capital expenditure reaches $1,3bn 5 September 2015 HARARE - Zimplats -- Zimbabwe's largest platinum producer -- has spent over $1,3 billion on its operations in the country in the past 13 years, businessdaily has learnt. Its annual integrated report released on Wednesday, the platinum miner said it has also paid $513 million to government in t...
Zimplats targets 280k platinum ounces 4 September 2015 HARARE - Zimbabwe's largest platinum producer, Zimplats, says it targets to increase production by 47 percent to 280 000 ounces next year up from 190 000 ounces recorded in the 12 months to June 30, 2015. The group's chief executive, Alex Mhembere, on Wednesday told analysts that the company h...